होशे6ERV-NE - परमप्रभु तर्फ - Bible Gateway
होशे 5होशे 7
होशे6Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
परमप्रभु तर्फ फर्कि आउँनेको पुरस्कार
6 “आऊ, हामी परमप्रभुतिर फर्कौ
किनभने उहाँले हामीलाई घायल पार्नु भएकोछ,
र उहाँले नै हामीलाई निको पार्नुहुनेछ।
उहाँले चोट पार्नु भएकोछ,
र उहाँले नै हामीलाई मलम पट्टी बाँध्नु हुनेछ।
2 दुइ दिनपछि उहाँले हामीलाई पुनःर्जीवित पार्नु हुनेछ
अनि तेस्रो दिन उहाँले हामीलाई माथि उठाउँनु हुनेछ।
हामी उहाँकै अघि जिउँदो हुनेछौं।
3 आऊ, हामी परमप्रभुलाई चिनौं,
हामी परमप्रभुलाई चिन्ने प्रयन्त गरिरहौं।
हामीलाई थाह छ उहाँ आउनुहुनेछ।
उहाँको आगमन प्रभात झैं निश्चय छ।
उहाँ हामीकहाँ जमीनलाई भिजाउने,
आखिरी बर्षा झैं आउनु हुनेछ।”
मानिसहरू विश्वास योग्य छैनन्
4 “ए एप्रैम, म तिमीलाई के गरूँ?
ए यहूदा म तिमीलाई के गरूँ?
किनकि तेरो प्रेम बिहानको कुइरो जस्तै,
र बिलिने शीत जस्तै छ।
5 यसैकारण मैले तिनीहरूमाथि
अगमवक्ताद्वारा बञ्चरो चलाएकोछु।
मैले तिनीहरूलाई मेरो मुखको वचनद्वारा घात गरेकोछु।
मेरो न्यायहरू ज्योति झैं प्रकट हुनेछन।
6 किनभने म अमर प्रेम चाहन्छु
अनि मानिसहरूले बल्दै गरेको बलि ल्याउनु भन्दा,
परमेश्वरलाई बेशी जानेको म चाहन्छु।
7 तर तिनीहरूले ता आदमले जस्तै करार भङ्ग गरे।
त्यसैमा तिनीहरूले मेरो विरूद्धमा विश्वासघात व्यवहार देखाए।
8 गिलाद अधर्मीहरूको शहर हो।
त्यो रगतले भरिएको छ।
9 जसरी डाँकूहरूले मानिसलाई ढुकिबस्छन्,
त्यसरीनै पूजाहरीहरूले गट्ठा बाँधेका छन्।
तिनीहरूले शकेम जाने बाटोमा हत्या गर्दछन्।
निश्चय तिनीहरूले महा-अपराध गरेकाछन्।
10 इस्राएलको कुलमा मैले घिनलाग्दो कुरो देखेको छु,
एप्रैमको वेश्यावृत्ति त्यहाँ छ।
इस्राएल अशुद्ध भएको छ।
11 ए यहूदा तिम्रा निम्ति पनि कटनीको समय तोकिएको छ।
त्यो हुनेछ जब म मेरो प्रजाको सुदिन फर्काउनेछु।”